लत लाग्ने क्याण्डी – Sirjana …….
केहि गन्थन मन्थन र विचारहरु
लत लाग्ने क्याण्डी
क्याण्डी सबैलाई मन पर्छ । बच्चाहरुलाई त झनै मन पर्छ । क्याण्डी खान भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् बच्चाहरु । तर यो लत लाग्ने क्याण्डी, बच्चालाई भन्दा ठूलालाई मन पर्छ । यो खाने नभई खेल्ने क्याण्डी हो । यसलाई “क्याण्डी क्रस सेगा” भनेर चिनिन्छ ।
क्याण्डी क्रस सेगाको लतमा धेरैजना परेका छन् र त्यसमध्ये म पनि एक हुँ । यो क्याण्डीको लतमा परेपछि के के हुन सक्छ म क्रमैसँग बताउने छु ।
१. समय गएको पत्तै हुँदैन ः एक गेम खेल्छु भनेर मोवाइल समात्यो पाँच वा त्यो भन्दा बढी गेम खेलिन्छ । हारे पाँच गेम जिते त्यो भन्दा बेसी खेल्न सकिन्छ । पाँच गेम हार्दा पनि लगभग १५÷२० मिनेट त्यसै जान्छ । एक गेम खेलेर छाड्छु भने पनि यसले लठ््याएर छाड्नै सकिन्दैन । एउटा लाइफ भए मात्र एक पटक खेल्ने हो । लाइफ भए सम्म छाड्न मन लाग्दैन, यो क्याण्डीलाई ।
क्याण्डी खाने मान्छे टेक्नोलोजी चलाउन जान्ने छ भने मोबाइलमा समय अघि सारेर पनि लाइफ बढाइ क्याण्डी खेल्ने गर्छन् । मैले पनि धेरै पटक त्यसरी लाइफ बढाएर खेलेको छु । यस्तो गर्द २–४ घण्टा नै क्याण्डी खेल्न सकिन्छ तर समयले डाँडा काटीसकेको पत्तै हुँदैन ।
२. खानेकुराको सत्यानास ः क्याण्डी पड्काउने लत लागेको मान्छेले खाना खाने बेलामा पनि क्याण्डी खेल्न छाड्दैन । त्यसो भएपछि खाना सेलाउने भयो र सेलाएको खाना राम्रोसँग खान सकिन्दैन । क्याण्डी फोड्ने मान्छेले खाना पकाउँदा पनि क्याण्डी छाड्दैन र खाना कहिलेकाहि डढ्ने पनि गर्छ । खाना डढेपछि न अरुले खान सक्नु न आफूले नै । अनि भएन त खानेकुराको सत्यानास् ।
३. कामको थुप्रो ः जब समय जति क्याण्डी मै खर्च हुन्छ भने कामको थुप्रो नलाग्ने कुरै भएन । क्याण्डी खेल्दिन, काम गर्छु भनेर काम गर्न लाग्यो । एक छिन खेल खेलु लागि हाल्छ । अनि एक गेम, एक गेम भन्दा भन्दै धेरै गेम खेलि सकिन्छ । अहिलेको काम भरे, भरेको काम भोलि, भोलिको काम पर्सि । अनि त सकि गो नि …… ।
४. साथीहरु रिसाउने, सम्बन्ध बिग्रने ः बच्चालाई क्याण्डी दियो वा बच्चाले क्याण्डी माग्यो भने बच्चासंग सम्बन्ध सप्रिन्छ । तर यो क्याण्डीले सम्बन्ध बिगार्छ । क्याण्डी नखेल्ने साथीहरु फेसबुक म्यासेजमा क्याण्डीमा लाइफ माग्यो भनेर रिसाउँछन् र अनफ्रेन्ड गर्छु भन्छन् । अन्य ठाउँमा काम गरेन, भनेको कुरा सुनेन भनेर रिसाउने । कुरा गर्दै क्याण्डी खेल्दा कुराको सिलसिला बिग्रेर बर्बाद । सुनी राखेको छु भनी रहन्दा पनि ध्यान क्याण्डीमा हुँदा रेसपोन्स अन्यथा हुँदा परिवारजन रिसाउने त भयो नै ।
५. बिनासित्तिको गालि खाने ः क्याण्डीको लतले गर्दा यत्ति धेरै गालि खानुपर्ने तर पनि क्याण्डी प्यारो लाग्ने । अचम्मैको लत लगाउने । क्याण्डी खेल्दा त गालि खाने नै भयो, नखेल्दा पनि यसले धेरै क्याण्डी खेल्छ भनेर लागि खाइने ।
समयको बर्वादी, खानेकुराको सत्यानास, कामको थुप्रो लगाउने, सम्बन्धमा कटुता र गालि खान्दा पनि नछुट्ने लत लगाउने क्याण्डी । यस्तो क्याण्डीलाई के गर्ने होला ? छाड्न नि नसक्ने, राख्न नि हैरान ।
Author sirjanaPosted on मे 26, 2016 Categories गन्थन मन्थन
अघिल्लो Previous post: Everyone hasastory to tell: One Year of Earthquake
अर्को Next post: Name of Limbu Gods/Godesses
Sirjana ……. Createafree website or blog at WordPress.com.